ရင်သား လှပရန်အတွက် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု | Moe Naymin
စစ်သည်ပုံစံ ယောဂသည် သင့်ကို အားပြည့်စေရုံသာမကဘဲ သင်၏ ရင်အုံ (thorax) ကြွက်သားကို ပျော့ပြောင်း သန်မာစေပါသည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ရန် သင်၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မျဉ်းပြိုင်ချဲထားပါ။ သင်၏ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကို ကိုးဆယ်ဒီဂရီလှည့်ပြီး ညာဘက်ခြေထောက်အထဲထည့်ပါ။ အသက်ရှုထုတ်ပြီး သင်၏ဘယ်ဘက်ဒူးခေါင်းကို ကွေးပါ။ သင်၏ညာဘက်ခြေထောက်ကို တည့်တည့်ထားပါ။ လက်မောင်းကို အပေါ်မြှောက်ပြီး ပုခုံးနှင့်တစ်တန်းထဲထားပါ။ ဦးခေါင်းကို ဘယ်ဘက်လှည့်ပြီး ခါးကိုကြည့်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ခုနှစ်ကြိမ်မှ ဆယ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး ညာဘက်ပြောင်းပါ။
1.Place your feet wide apart, parallel to each other.
2.Turn your left foot to the left 90 degrees and your right foot inside. Breathe out, and bend your left knee.
3.Your right leg should stay straight. Raise your arms, and put them in line with your shoulders. Turn your head left, looking at your wrist.
4.Repeat 7-10 times, then do the same to the right side.
ဤပုံစံအနေအထားသည် သင်၏ရင်အုံကြွက်သားကို ဆွဲဆန့်ခြင်း၊ လျော့တင်းခြင်း ပြုလုပ်ပြီး ကျောရိုးမနှင့် သွေးလည်ပတ်နှုန်းကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် ခြေနှစ်ဖက်ကိုခြားထားပါ။ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကို ကိုးဆယ်ဒီဂရီထားပြီး ညာဘက်ခြေထောက်ကို ဆယ်ငါးဒီဂရီ အနေအထားတွင်ထားပါ။ သင်၏ ဘယ်ဘက်ခြေကျင်းဝတ်ကို ဘယ်ဘက်လက်နှင့်ထိပါ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကြမ်းပြင်နှင့်လက်ဖ၀ါးနှင့်ပါ တဖြည်းဖြည်းထိလာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ လက်နှစ်ဖက်ကို သေသေချာချာ ဖြောင့်တန်းထားပါ။ ဒူးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲ ဖြောင့်မတ်အောင်ပြုလုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ မျက်နှာကို အပေါ်မော့ထားပြီး လက်ချောင်းများကို ကြည့်ပါ။ ပြီးလျှင် တခြားတစ်ဖက်ကို ပြုလုပ်ပါ။
1.Place your feet wide apart. Turn the left one 90 degrees and the right one 15 degrees.
2.Touch your left ankle with your left hand (with time, you’ll be able to put your open palm on the floor), and stretch your right arm upwards so that your arms makeastraight line. Keep your knees and spine straight too.
3.Turn your face up, and look at your fingers. Then repeat the exercise with the other side.
ထိုပုံစံသည် အဆုတ်၊ ရင်အုပ်ကြွက်သား၊ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားများကို ပြေလျော့သန်မာစေပြီး သင်၏ကိုယ်နေဟန်ထားကိုလဲ တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ၀မ်းလျားမှောက်ပြီး အသက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းရှုသွင်းပါ။ ပြီးလျှင် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ခေါင်းကို ဖြေးဖြေးချင်းမော့ပါ။ ပြီးလျှင် အသက်ရှုထုတ်ပြီး နဂိုမူလ၀မ်းလျားမှောက်ပုံစံ ပြန်နေပါ။ တဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန်ကြာမြင့်ချိန်ကို တိုးမြင့်ပြီး အကြိမ်အရေအတွက် ဆယ်ကြိမ်ဝန်းကျင်ခန့် ပြုလုပ်ပါ။
1.Lie on your stomach and inhale deeply. Slowly raise your torso, and keep your lower body to the floor at the same time. Balance on your legs and arms.
2.Raise your head and look up.
3.Slowly breathe out and assume the initial position. Try increasing the time you stay in the pose with each repetition.
ဤပုံစံကို ခါးနာသည့်လူများ အထူးပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ကျောရိုးတစ်လျောက် ဆွဲဆန့်ပြီး သင်၏ရင်သားကို လှပသည့်ပုံစံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ၀မ်းလျားမှောက်ပါ။ အသက်ရှုထုတ်ပါ။ ဒူးကိုကွေးညွတ်ပြီး အပေါ်ဘက်သို့ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ကော့တင်ပါ။ တတ်နိုင်သလောက် ခြေကျင်းဝတ်နှင့်လက်ကို ထိအောင်လုပ်ပါ။ အသက်ရှုပါ။ ပြီးလျင် ဖြည်းဖြည်းချင်း အသက်ရှုထုတ်ပြီး ခြေထောက်နှင့်လက်ကို တတ်နိုင်သလောက် အပေါ်ဘက်သို့ဆန့်တင်ပါ။ တင်ပါးနှင့်ရင်ဘက်တို့လဲ ကြမ်းပြင်အပေါ်သို့ မြှောက်ပြီး ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုထဲ ကြမ်းပြင်နှင့်ထိထားပါ။
1.Lie on your stomach, breathe out, bend your knees, and raise them behind you to your head. Try holding your ankles with your hands.
2.Now slowly breathe out again, and pull your legs and arms upwards as far as you can. Your hips and breasts should lift from the floor, and you should balance on your stomach.
3.Try to stay in this position for 30 seconds.
သင်၏ရင်အုံ၊ ကျောရိုး၊ လည်ပင်း ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ခေါက်ကိုက်ခြင်းကို သိသာစေပါသည်။ ပတ်လက်အိပ်ပါ။ ခြေထောက်ကို ပုခုံးအကျယ်ထက် နည်းနည်ပိုကားပါ။ ပြီးလျှင် သင်၏တင်ပါးဆီသို့ ဆွဲကပ်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းနောက်တွင်ထားပြီး လက်ချောင်းများကို ကျောပြင်နှင့်ထိထားပါ။ အသက်ရှုထုတ်ပြီး ရင်နှင့်တင်ကို တတ်နိုင်သလောက်ဖွင့်ထားပါ။ သင်၏လက်မောင်းကို လုံးဝဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီး ဤပုံစံအတိုင်း စက္ကန့်သုံးဆယ်ထားပါ။
1.Lie down on your back, and place your feetabit more than shoulder width apart, then pull them to your buttocks.
2.Put your hands behind your head palms down with your fingers pointing to your back. Breathe out and raise your breasts and hips as high as you can.
3.Try straightening your arms completely. Stay in this position for 30 seconds.
ကျောရိုးနှင့်ရင်ဘက်ရှိ အရွတ်နှင့်ကြွက်သားများကို ပြေလျော့သန်မာစေပါသည်။ အသက်ရှုခြင်းနှင့်သွေးလေစီးဆင်းမှုကို မှန်ကန်စေပါသည်။ သင်၏လက်တံတောင်စစ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကွေး၍ထောက်ထားပါ။ ဒူးခေါင်းကိုကွေးပြီး ဖြေးဖြေးချင်းအသက်ရှုထုတ်၍ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုထောင်ပါ။ ပြီးလျှင် ခြေထောက်ကိုဆန့်ထုတ်ပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း အနည်းဆုံး စက္ကန့်နှစ်ဆယ်မှ အများဆုံးနှစ်မိနစ်ထိနေပါ။
1.Stand on your knees and put your forearms on the floor. Knit your fingers together to formabowl, then put the top of your head on the mat so that the back of your head is in the ’bowl.’
2.Bend your knees, breathe out, and raise your feet off the ground.
3Stretch your legs upwards, and stay like this for 30 seconds to2minutes, depending on your ability.
ခါးနာခြင်း၊ ကျောနာခြင်းအတွက် အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ အဆုပ်ပမာဏကို တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပြီး ရင်အုံကို သန်မာစေသည်။
ဒူးထောက်ပါ။ ဖြေးဖြေးချင်းအနောက်သို့ကွေးပြီး သင့်လက်ကို ခြေဖ၀ါးနှင့်ထိပါ။ ကျောကို အောက်သို့ ညွတ်ကိုင်းပြီး ရင်အုံကို ဆွဲဆန့်ပါ။ ပြီးလျှင် စက္ကန့်သုံးဆယ်ခန့် နားပါ။
1.Stand on your knees and pull your feet together.
2.Slowly bend backwards and put your hands on your heels. Then arch your back and stretch your ribs. Your head should be pulled to the floor.
3.Stay like this for 30 seconds and assume the initial position.